Abavelisi beeNdlela zeDock kunye nababoneleli | I-China Dock Ramp Factory
I-China Dock RampYahlulwe yaziindidi ezimbini, enye iyinqanawe ehamba ngenqanawa kwaye enye imile kwireyiphu emileyo.I-dock e-dock eguqulweyo sisixhobo esikhethekileyo sokuncedisa ekulayisheni imithwalo yetroli kunye nokothula kufakwe kwiqonga lokugcina. Ukuphakama kwecandelo langaphambili leqonga lebhulorho enokuhlengahlengiswa ngokobude begumbi lelori, kwaye ukugqagqana kwemilebe kuhlala kufutshane negumbi.
Ilayisha umthamo: 6 ~ 15ton.Offer inkonzo elicwangcisiweyo. Ubungakanani beplatform: 1100 * 2000mm okanye 1100 * 2500mm. Nikezela ngenkonzo eyenziwe ngokwezifiso. Spillover ivalve: Inokuthintela uxinzelelo oluphezulu xa umatshini esenyuka. Lungisa uxinzelelo. Ukwehla kwesantya kwivelufa: inokuhla xa udibana nongxamiseko okanye ucime umbane.
I-Dock Ramp emileyo iqhutywa sisikhululo sempompo ye-hydraulic kunye nemoto yombane. Lixhotyiswe iisilinda hydraulic ezimbini. Enye isetyenziselwa ukuphakamisa iqonga kwaye enye isetyenziselwa ukuphakamisa i-clapper. Isebenza kwisitishi sezothutho okanye kwisikhululo sempahla, ukulayishwa kwempahla yokugcina njl.
Zonke iintlobo zokuphatha izithuthi zingadlula kakuhle kwibhulorho yokukhwela ukuhambisa iimpahla phakathi komgangatho wokugcina kunye nokuhamba. Yisebenzisa imowudi yolawulo lweqhosha elinye, ekulungeleyo ukuba isebenze. Mnye kuphela umqhubi ofunekayo asebenze, kwaye iimpahla zinokulayishwa ngokukhawuleza kwaye zikothulwe. Kwenza ukulayisha okunzima kunye nokukothula umsebenzi kwishishini kube lula, kukhuseleke kwaye kukhawuleze, ngaloo ndlela kugcinwe uninzi lwabasebenzi, kuphuculwe ukusebenza kakuhle komsebenzi, kunye nokufumana izibonelelo zoqoqosho eziphezulu. Sisixhobo esifunekayo kwimveliso ekhuselekileyo nenenkqubela phambili yamashishini anamhlanje kunye nokuphucula isantya sokusebenza. kuthulwe. Ukuhamba kwayo kunokuhlangabezana neemfuno zokulayisha ngokukhawuleza kunye nokothula imisebenzi kwiindawo ezahlukeneyo. Yenziwe nge-manganese yesinyithi esinexande esinexande esineqhubu elinamandla aphezulu kakhulu. Ithambeka lenziwe ngetambo yentsimbi enamazinyo, enokusebenza okuhle ngokuchasene neskid. Umphezulu wezixhobo uphathwa ngokudubula ngokudubula nangokwehla, kwaye kusetyenziswa impompo ngesandla esetyenziswa ngamandla okuphakamisa. Akukho mfuneko yombane wangaphandle, olungele ukusetyenziswa kwangaphandle kwiindawo ezingenambane.